छालामा यस्तो निशान देखिएमा हुनुहोस् होशियार ! लाग्नसक्छ सोरायसिस रोग – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /Intresting/छालामा यस्तो निशान देखिएमा हुनुहोस् होशियार ! लाग्नसक्छ सोरायसिस रोग
दिनमा सुत्न नहुनुहोस्।
ताजा र हल्का तातो खाना खानुहोस्।
खाना पछि हल्का पैदल यात्रा गर्नुहोस्।
हल्का हृदय व्यायाम जारी।
तनावमुक्त हुन कोसिस गर्नुहोस्।